Filtrer les éléments par date : mercredi, 29 mai 2019
mercredi, 29 mai 2019 20:23
Mahajanga: Nametraka fitoriana ny vondron'ireo kandida 13
Teo anivon'ny CENI Mahajanga no nametrahan'ireo kandida depiote miisa 13 amin'ireo kandida 15, ny fitoriana ny tolakandro teo.
"Tsy mankasitraka iny fifidianana solombavambahoaka feno hosoka iny izahay" hoy izy ireo.
Nisy mpomba azy ireo nilanja sorabaventy tonga nanohana ireto kandida ireto. Milaza izy ireo fa hitohy ny fitakiana.
Niatrana tsy lavitra teo ny mpitandro ny filaminana.
mercredi, 29 mai 2019 18:30
Îles éparses: Haverina amin'i Madagasikara alohan'ny 26 jona 2020 ?
Noraisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nihaona taminy, tao amin'ny Lapan'i Elysée androany ny filoha Andry Rajoelina. ity no fivoahana an'i Madagasikara fahadimy nataon'i Andry Rajoelina taorian'ny nahavoafidy azy, ary voalohany tany Eoropa.
Nisy ny tafa fohy niarahan'ireo filoha roalahy tamin'ny mpanao gazety taorian'ny dinik'izy ireo manokana, nitateran'izy ireo ny votoatin'izany, nahakasika ny fanamafisana ny fiaraha-miasa, fandriam-pahalemana, fampianarana, fambolena, angovo, tontolo iainana...
Voaresaka manokana ihany koa ny amin'ireo nosy kely manodidina na îles éparses. Nangataka tamin'ny filoha Macron ny filoha Rajoelina ny hijerena vahaolana ny amin'ny fitantanana na ny hamerenana amin'i Madagasikara ireo nosy manodidina ireo.
mercredi, 29 mai 2019 18:17
Angovo: « Tsy maintsy hihena ny vidin-jiro ho aloan'ny Malagasy », hoy i Andry Rajoelina
« Tsy maintsy hihena ny vidin-jiro ho aloan'ny Malagasy atsy hoatsy. Tsy maintsy hotafarina ny Jirama ary tsy maintsy hasiam-panamboarana sy fandaminana hampijoro ny tena fitantanana mahomby marina sy lavitra ny kolikoly isika ». Fanambarana nataon’ny filoha Andry Rajoelina ao amin’ny pejiny Facebook io mifanindrandalana amin’ny fitsidihana ofisialy tanterahiny any Frantsa hatry ny omaly.
Nisy ny fanaovan-tsonia tetikasa manodidina ny angovo sy ny famokarana herinaratra azo havaozina niaraka tamin'ireo mpandraharaha Frantsay, izay nasaina ho avy aty Madagasikara.
Nilaza i Andry Rajoelina fa misokatra amin'ny rehetra ny fampiasam-bola eto Madagasikara, saingy ny tombontsoa ho an'ny Malagasy sy ny famoronana asa ary ny fampiroboroboana ny indostria no tena imasoana.
mercredi, 29 mai 2019 18:04
Frantsa: Fihaonan’ny delegasiona malagasy tamin’ireo mpitantana orinasa frantsay mivondrona ao amin’ny MEDEF
Fifanaraham-piaraha-miasa efatra no natao sonia omaly nandritra ny fihaonan’ny delegasiona malagasy tarihin’ny filoha Andry Rajoelina tamin’ireo mpitantana orinasa frantsay mivondrona ao amin’ny MEDEF (Mouvement des entreprises de France).
Mikasika ny sehatry ny famokarana herinaratra ny telo amin’ireo fifanarahana vita sonia ireo. Voakasik’izany ny tetikasa ao Sahofika miaraka amin’ny Groupe Eiffage Concessions izay hamokatra 200Mgw; ny fananganana ivon-toerana mpamokatra herinaretra ao Toliara miaraka amin’ny Akuo Energy ary ny fananganana tobim-pamokarana ao Volobe-Toamasina izay hamokatra 120Mgw miaraka amin’ny Compagnie Générale d'hydroélectricité de France.
mercredi, 29 mai 2019 17:54
Madagasikara-Frankôfônia: Hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry fampianarana
Nisy omaly ny fihaonan’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny Sekretera Jeneralin’ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) Louise Mushikiwabo tao amin’ny foiben’ity Vondron’ny tany mampiasa amin’ny ampahany na manontolo ny teny frantsay.
Nohamafisina nandritra izany fihaonana izany ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry fampianarana, indrindra eo amin’ny lafiny fampitaovana ny mpianatra sy fampiofanana ireo mpampianatra malagasy.
mercredi, 29 mai 2019 17:24
Distrikan’Antanifotsy: Misaotra ireo vahoaka nametraka ny fitokisana taminy i Rafidimanana Narson
Mitarika vonjimaika amin'ny vokatra tamin’ny fifidianana solombavambahoaka tato anatin’ny Distrikan’Antanifotsy, Faritra Vakinankaratra ny kandida laharana faha-9 tamin'ny biletà tokana, Rafidimanana Narson, avy amin’ny fikambanana « Ray Dia ».
Misaotra ireo vahoaka nametraka ny fitokisana taminy sy ireo mpiara-miasa sy ny namana nanampy azy ny tenany tamin’ny fanambarana nataony androany tao amin’ny pejiny Facebook.
« Tsy niandry ho lany solombavambahoaka ny tenako vao nitondra fanampiana ho an’ny mponin’ny Distrikan’Antanifotsy fa efa natomboko tamin’ireny sehatra hipetrahan’ny filànareo izany dia ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fiompiana ary làlana » hoy Rafidimanana Narson.
Miaramilan’ny « ZRPS Alpha »: Nahatratra basim-borona 1 ary nahatafaverina omby miisa 75
Anisan’ny vokatry ny fampandriantany nataon’ny miaramilan’ny « Zone rurale prioritaire de sécurité » na ZRPS Alpha tao amin’ny faritra Amboakify Ambalamidera Vohitrarivo, Faritra Ihorombe, omaly talata 28 may 2019, io.
Raha nirotsaka an-tsehatra ny miaramila dia nahatratra basim-borona 1 niaraka tamin’ny ody gasy tamin’ny moara, ary koa nahatafaverina omby miisa 75. Nandritra izany ihany koa no nahatrarana kavin’omby miisa 135 tao amin’ny trano fonenan’i Rémi. Ity farany moa dia mbola tadiavina hatramin’izao.
mercredi, 29 mai 2019 17:17
Sakaraha: Notafihan'ny dahalo ny mpanatitra voka-pifidianana
Lasibatra ny mpanatitra voka-pifidianana avy amin’ny Kaominina Bereketa sy Mikoboka, Distrikan’i Sakaraha. Omaly no nisehoan’ity fanafihana ity. Raha ny loharanom-baovao dia noteren’ireo olon-dratsy sady nambanana basy ireo delegen’ny kandida hanao sonia ny fitanana an-tsoratra fifidianana efa voaomana.
Manahy ny maro manoloana izao tranga izao ny mety hivadihan’ny voka-pifidianana solombavambahoaka aty Sakaraha.
Talohan’izao, ny harivan’ny alahady nialoha ny androm-pifidianana dia nisy tovolahy iray mpanohana kandida depiote, maty nisy namono.